एकै ब्यक्तिले तीन ठाँउबाट भत्ता लिएको खुलासा ! - Jyotinews
एकै ब्यक्तिले तीन ठाँउबाट भत्ता लिएको खुलासा !
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज २० गते ११:३६
खोटाङ, २० असोज । साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिम ठेगाना उल्लेख भएकी तीन जना फुलसरी राईको नाममा वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिएको छ । एउटै नाम, एउटै जन्म मिति, एउटै नागरिकता नम्बर र एउटै ठेगाना राखेर वर्षौंदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएकी तीनै जना फुलसरी राई सो वडामै छैनन् ।
अहिलेको उमेर ७१ वर्ष खुलाएर नियमित भत्ता बुझ्दै आएको देखाइएकी तीनै जना फुलसरी राईको नागरिकता नम्बर ८६५/७२७ उल्लेख छ । तीनै जनाले वडा सचिवमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दा औँठा छाप लगाएका छन् ।